ဒီနေ့ 27June 2018 ရက် ညနေပိုင်း ဂူတွင်းက ကလေးများရဲ့ အခြေအနေ....
ကျောက်တောင်ထဲ ပိတ်မိနေသည့် တောဝက်ဘောလုံးအသင်းရဲ့ နောက်ဆုံးအခြေအနေ
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် မဲစိုင် ကျောက်လှိုင်ဂူထဲ ပိတ်ပိနေတဲ့ တောဝက်ရိုင်းလူငယ်ဘောလုံးအသင်းဝင် ၁၃ ဦးကို ကယ်ဆယ်ရေးမစ်ရှင် (၅)ရက်မြောက်နေ့ မှာ အခက်ခဲဆိုး ရေပြည့်နေတဲ့လှိုင်ခေါင်းကို ဖြတ်နေကြတဲ့ ထိုင်း အထုးရေတပ်ဖွဲ့ ဝင်တွေက သတင်းပို့ နေတာကို စောင့်နေတဲ့စစ်တိုင်းမှူးဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းပေါင်း ၁၀၀၀သုံးပြီး ရဟတ်ယာဉ်ငါးစင်းနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။
မနေ့ က တချိန်လုံးမိုးမပြတ်လို့လှိုင်ဂူထဲမှာ ရေတွေ ပြည့်နေတာကို ပိုက်လုံးကြီးတွေသုံးစုတ်ထုတ်ရင်း ဒီကနေ့ ဖြတ်ရမယ့်နေရာဟာပိုပြီး အခက်ခဲဆုံးလို့ သိရပါတယ်။
အကြီးမားပြသနာက မိုးအဆက်မပြတ်ရွာနေပြီး ရေတွေက လှိုင်ဂူထဲ ၀င်ရောက်လာနေတာပါ။
လှိုင်းခေါင်း အတွင်းကစုတ်ထုတ်တဲ့ ရေတွေကြောင့် ကျောက်တောင်တ၀ိုက်က လယ်မြေတွေမှာ ရေတွေဝပ်နေတာကို လယ် သမားတွေကလူ့ အသက်ထက်အရေးမကြီးဘူး ဆိုပြီး ခွင့်ပြုထားပါတယ်။
တောင်တ၀ိုက်မှာ လူစည်လို့ဈေးရောင်းတာမျိုး ခလေးတွေကိုရင်းပြီးအလှူငွေထည့်ကြဘို့အွန်လိုင်း လိုက်လိမ်အလှူခံနေသူတွေကို ခွင့်မပြုပါဘူး။
ခုလို ၀န်ထမ်း၁၀၀၀ နဲ့ပြည်သူတွေ အတွက် နေ့ စဉ် စားဘို့ အတွက် စစ်တပ်နဲ့ ချင်ရိုင်မြို့ က ဟော်တယ်ပိုင်ရှင်တွေ နေ့ စဉ်အစားအသောက်ကိုစီစဉ်ပေးနေတာတွေ့ ရပါတယ်။
ပြည်သူကို တန်ဘိုးထားတဲ့ နိုင်ငံမှာ လူဖြစ်ရတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေအတွက် ၀မ်းသာကြည်နူးစရာဖြစ်ပါတယ်။
LIVE! 11.00น.ปฏิบัติการค้นหา 13 ชีวิต | 27 มิ.ย.61
LIVE! 11.00น.ปฏิบัติการค้นหา 13 ชีวิต | 27 มิ.ย.61เกาะติดปฏิบัติการค้นหา 13 ชีวิต ที่หายไปในถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ระดมสรรพกำลังค้นหา แต่ยังมีอุปสรรคถูกฝนที่ตกในพื้นที่ #ถ้ำหลวง #เด็กติดถ้ำ #ส่งใจไปถ้ำหลวง
Dikirim oleh สำนักข่าวไทย pada Selasa, 26 Juni 2018
ကြောကျတောငျထဲ ပိတျမိနသေညျ့ တောဝကျဘောလုံးအသငျးရဲ့ နောကျဆုံးအခွအေနေ
ထိုငျးမွနျမာနယျစပျ မဲစိုငျ ကြောကျလှိုငျဂူထဲ ပိတျပိနတေဲ့ တောဝကျရိုငျးလူငယျဘောလုံးအသငျးဝငျ ၁၃ ဦးကို ကယျဆယျရေးမဈရှငျ (၅)ရကျမွောကျနေ့ မှာ အခကျခဲဆိုး ရပွေညျ့နတေဲ့လှိုငျခေါငျးကို ဖွတျနကွေတဲ့ ထိုငျး အထုးရတေပျဖှဲ့ ဝငျတှကေ သတငျးပို့ နတောကို စောငျ့နတေဲ့စဈတိုငျးမှူးဖွဈပါတယျ။
နိုငျငံ့ဝနျထမျးပေါငျး ၁ဝဝဝသုံးပွီး ရဟတျယာဉျငါးစငျးနဲ့ကယျဆယျရေးလုပျငနျးတှကေို ဆကျလကျလုပျဆောငျနကွေပါတယျ။
မနေ့ က တခြိနျလုံးမိုးမပွတျလို့လှိုငျဂူထဲမှာ ရတှေေ ပွညျ့နတောကို ပိုကျလုံးကွီးတှသေုံးစုတျထုတျရငျး ဒီကနေ့ ဖွတျရမယျ့နရောဟာပိုပွီး အခကျခဲဆုံးလို့ သိရပါတယျ။
အကွီးမားပွသနာက မိုးအဆကျမပွတျရှာနပွေီး ရတှေကေ လှိုငျဂူထဲ ဝငျရောကျလာနတောပါ။
လှိုငျးခေါငျး အတှငျးကစုတျထုတျတဲ့ ရတှေကွေောငျ့ ကြောကျတောငျတဝိုကျက လယျမွတှေမှော ရတှေဝေပျနတောကို လယျ သမားတှကေလူ့ အသကျထကျအရေးမကွီးဘူး ဆိုပွီး ခှငျ့ပွုထားပါတယျ။
တောငျတဝိုကျမှာ လူစညျလို့စြေးရောငျးတာမြိုး ခလေးတှကေိုရငျးပွီးအလှူငှထေညျ့ကွဘို့အှနျလိုငျး လိုကျလိမျအလှူခံနသေူတှကေို ခှငျ့မပွုပါဘူး။
ခုလို ဝနျထမျး၁၀၀၀ နဲ့ပွညျသူတှေ အတှကျ နေ့ စဉျ စားဘို့ အတှကျ စဈတပျနဲ့ ခငျြရိုငျမွို့ က ဟျောတယျပိုငျရှငျတှေ နေ့ စဉျအစားအသောကျကိုစီစဉျပေးနတောတှေ့ ရပါတယျ။
ပွညျသူကို တနျဘိုးထားတဲ့ နိုငျငံမှာ လူဖွဈရတဲ့ ထိုငျးနိုငျငံသားတှအေတှကျ ဝမျးသာကွညျနူးစရာဖွဈပါတယျ။